जापानी [क्योटो टेम्पल र श्राइन बेस्ट 3] द्वारा सिफारिस गरिएको | संस्कृति | जापान गाइड र सूचना |アクセス日本留学
जापानी [क्योटो टेम्पल एण्ड श्राइन बेस्ट ३] द्वारा सिफारिस गरिएको
अपडेट | जनवरी १७, २०२२
"वर्षको लागि कुल नयाँ वर्षको दिन हो।" धेरै जापानीहरू नयाँ वर्षमा पहिलो पटक मन्दिर र तीर्थहरूमा जान्छन्, भगवानलाई धन्यवाद दिन्छन्, वर्षको लागि लक्ष्यहरू सेट गर्छन्, र भाग्यको साथ वर्षको लागि भाग्य। यस पटक, हामी तपाईंलाई मन्दिरहरू र तीर्थस्थलहरूको परिचय गराउन चाहन्छौं जुन तपाईंले क्योटो आउँदा निश्चित रूपमा भ्रमण गर्नुपर्छ, साथै वरपरका घुम्नलायक स्थलहरू।
उत्कृष्ट १ [फुशिमी इनारी तैशा]
उत्कृष्ट २ [कियोमिजुडेरा]
उत्कृष्ट ३ [किंकाकुजी]
मन्दिर र मन्दिर बीचको भिन्नताको बारेमा
त्यो कहाँ छ?⇒नक्साको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
पाँच-अन्न उर्वरता (धान र गहुँ जस्ता धनी अन्न) र व्यापार समृद्धि (व्यवसाय राम्ररी चल्ने)का देवताका रूपमा प्रख्यात रहेका देशभर करिब ३० हजार इनारी तीर्थस्थल रहेको बताइएको छ। क्योटो। यो माउन्ट इनारी भनिने सम्पूर्ण पहाडमा बनेको तीर्थ हो र यो पावर स्पटको रूपमा पनि प्रसिद्ध छ। यो एक लामो इतिहास छ, र यस्तो देखिन्छ कि 2011 1300 वर्ष चिह्नित।
"सेनबोन टोरी" भनिने सिंदूर टोरी गेट्सको दृश्य एक उत्कृष्ट कृति हो, र यो इन्स्टाग्राममा धेरै साझा गरिएको छ।
यो विदेशी पर्यटकहरु मा धेरै लोकप्रिय छ र सप्ताह दिनहरुमा पनि धेरै मानिसहरु संग भीड छ। तपाईं दिनको 24 घण्टा उपासना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हामी बिहान वा बेलुका समय सिफारिस गर्छौं।
साथै, वर्षाका दिनहरूमा, त्यहाँ अपेक्षाकृत थोरै मानिसहरू हुन्छन् र तपाईंले रहस्यमय दृश्यहरू सामना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं भीडबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया वर्षाका दिनहरूमा भ्रमण गर्नुहोस्।
निकटतम स्टेशन JR Inari स्टेशन वा Keihan Line Fushimi Inari स्टेशन हो।
टोफुकुजी मन्दिर र कोम्योइन मन्दिर, जुन तिनीहरूको शरद ऋतु रंगहरूको लागि प्रसिद्ध छ, नजिकै छन्, र तपाईं यी मन्दिरहरूको वरिपरि हिंड्न सक्नुहुन्छ।
यो केन्द्रबाट अलि टाढा छ, तर यो क्योटो स्टेशनबाट छोटो रेल वा बस सवारी हो, त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो आधा-दिनको पैदल योजनाको लागि उपयुक्त छ।
यो क्योटोको एक प्रसिद्ध पर्यटक गन्तव्य पनि हो, र यदि तपाईं क्योटो जानुभएको छ भने, तपाईंले यसलाई एक पटक भ्रमण गर्नुभएको हुन सक्छ।
Kiyomizu-dera लगभग 1200 वर्ष पहिले निर्माण गरिएको थियो र अब एक UNESCO विश्व सांस्कृतिक सम्पदा स्थल हो। अहिलेसम्म १० पटकभन्दा बढी आगलागी भइसकेको भए पनि हरेक पटक पूजा गर्नेहरूले यसलाई पुनर्निर्माण गरेको बताइएको छ ।
पहाडको ढलानमा बनाइएको अधिकतम 12 मिटर लम्बाइको काठको भवनको स्टेजलाई कुनै कीलहरू प्रयोग नगरी भेला गरिन्छ। ठूलो निर्णय लिनुलाई "कियोमिजुको स्टेजबाट हाम फाल्ने" सँग तुलना गर्न सकिन्छ।
तपाईं वसन्तमा चेरी फूलको दृश्य र शरद ऋतुमा शरद ऋतुमा पातहरूको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईं सीमित समयको लागि रातमा फरक दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
कियोमिजु-डेरामा पूजा गरिसकेपछि, तपाईं कोडाइजी मन्दिर र यासाका तीर्थबाट सान्नेइजाका र निनिजाका हुँदै पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ र गोजो क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंले वातावरण अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मियागावा-चो र सडकहरूमा घुम्न पनि सिफारिस गरिन्छ। जिओन शिजो।
मानक माचा मिठाईहरू बाहेक, त्यहाँ धेरै पसलहरू छन् जहाँ तपाईं प्रामाणिक रोस्टेड कफी र क्योटो क्राफ्ट बियरको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
आधिकारिक नाम "Rokuonji" हो, तर यसलाई सामान्यतया "Kinkakuji" भनिन्छ किनभने परिसर मा "Kinkaku" भनिने भवन विशेष गरी प्रसिद्ध छ।
यो पनि पुरानो हो, र मुरोमाची अवधि (१३३६-) मा शोगुन आशिकागाले बनाएको भनिन्छ।
किन्काकुजीको बगैंचा र वास्तुकलाले स्वर्गको शुद्ध भूमि (बौद्ध देवताहरू बस्ने र मृत्युपछि आरामदायी हुने संसार) को प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ र त्यस समयमा सम्राटलाई आमन्त्रित गरिएको थियो र चीन र अन्य देशहरूसँग सक्रिय रूपमा सांस्कृतिक आदानप्रदान गरिएको थियो। भाँचिएको जस्तो देखिन्छ।
वसन्त, ग्रीष्म, शरद र जाडोको प्रत्येक मौसममा दृश्यहरू फरक हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले भ्रमण गर्दा पवित्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि विगतका सबै महान व्यक्तिहरूले चिया पिउँदै बगैंचाको दृश्यको आनन्द उठाए, र यो त्यो युगको समयको यात्रा जस्तो लाग्छ।
किन्काकुजी बस वा रेल द्वारा पुग्न सकिन्छ, तर हामी भाडामा मोटरसाइकल सिफारिस गर्छौं। क्योटोमा धेरै भाडामा लिने मोटरसाइकल पसलहरू छन्, त्यसैले तपाईंले साइकल भाडामा लिएर किनकाकुजी-निशिजिन क्षेत्र-शिमोगामो तीर्थ-कामोगावा नदीको किनारमा खाजा खान सक्नुहुन्छ। तपाईं क्योटोको मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, म मन्दिर र मन्दिर बीचको भिन्नता छुट्याउन चाहन्छु।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मन्दिरहरू "बुद्ध धर्म" हुन् र तीर्थहरू "सिन्तो" हुन्, जुन विभिन्न धर्मका सुविधा हुन्। ठूलो भिन्नता यो हो कि मन्दिरहरूमा सामान्यतया बौद्ध मूर्तिहरू र चिहानहरू हुन्छन्, र तीर्थहरूमा टोरी गेटहरू हुन्छन्।
बुद्ध धर्म एक विदेशी धर्म हो जुन चीन र भारत जस्ता विदेशी देशहरूबाट जापानमा पेश गरिएको भनिन्छ।
मन्दिरमा भिक्षु, भिक्षुणीहरू जस्ता बौद्ध अभ्यासकहरू छन्, र त्यहाँ बुद्धका मूर्तिहरू राखिएका छन्। बुद्धका धेरै प्रकार छन्, जस्तै दैनीची न्योराई, याकुशी न्योराई, शाका न्योराई र सेकान नबोसात्सु।
अर्कोतर्फ, शिन्टो जापानी मूलको धर्म हो र धेरै देवताहरूको पूजा गर्दछ। हामी प्रकृति जस्तै पहाड, जंगल, ढुङ्गा, र पवित्र रूखहरू, साथै विशिष्ट मानिसहरूलाई पनि पूजा गर्छौं। शिन्टोको आधारभूत विचार यो हो कि भगवान संसारमा सबै कुरामा बास गर्नुहुन्छ।
भनिन्छ, तीर्थस्थलको उद्गमस्थल प्रकृतिको पूजा गर्ने ठाउँ र पवित्र अनुष्ठान गर्ने ठाउँ हो।
मन्दिरको प्रवेशद्वारमा उभिएको टोरीले भगवानको संसार र मानिसहरू बस्ने संसारलाई छुट्याउनको अर्थ राख्छ।
यसरी, यो जापानी संस्कृतिको विशिष्टता भन्न सकिन्छ कि विदेशबाट आएका धर्महरू र जापानका लागि अद्वितीय धर्महरू प्राचीन कालदेखि वर्तमानसम्म मेलमिलापमा अवस्थित छन्।
यस लेखमा विस्तृत पूजा शिष्टाचार प्रस्तुत गरिएको छ।
[जापानी संस्कृति] जापानको लागि "हाट्सुमोडे" अनौंठो के हो?
त्यो कस्तो थियो?
यहाँ तीनवटा सिफारिस गरिएका मन्दिरहरू र तीर्थहरू छन् जुन तपाईंले क्योटो भ्रमण गर्दा निश्चित रूपमा भ्रमण गर्नुपर्छ। मलाई आशा छ कि यो क्योटो भ्रमण गर्न सबैको लागि उपयोगी हुनेछ।
एक फ्रीलान्स जापानी शिक्षक र ओसाकाबाट स्थानीय गाइड। म २०२० मा क्योटोसँग प्रेममा परें र २०२१ मा सरेँ। हाल, जापानी भाषाहरू मुख्यतया निजी पाठहरूमा सिकाउँदा, उहाँ लेखन, चिनियाँ-जापानी अनुवाद प्रूफरीडिङ, र अनलाइन अनुभवहरूको योजना र व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ।